Hoggaanka sare ee Al-shabaab:- Shalay iyo Maanta. (Warbixin Xiisa badan oo meela badan taabanaysa). | warsugansomaliya.wordpress.com
Hoggaanka sare ee Al-shabaab:- Shalay iyo Maanta. (Warbixin Xiisa badan oo meela badan taabanaysa).
Ururka Alshabaab ee ku lammaansan Alqacida ayaa waxay xilligan ku jiraan Tabar-drridii ugu xumayd, iyadoo Hoggaankoodii Sarena noqdeen kuwo ay la soo daristay Kala-firxad iyo Kalsooni-darri baahsan.
Kooxda Alshabaab oo iyagu ka soo faracmay Golihii Maxkamadaha Islaamka Somalia (GMIS) ee ay Hoggaanka u hayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxay sannadihii 2006-dii ilaa 2011-kii ahaayeen Koox laga cabsado, isla markaana gacanta ku hayn jirtay inta badan Goballadda Koonfurta iyo Bartamaha Somalia, ayaa waxay ku caan baxeen dilalka nooca Madax-jebiska, Xukunnadda Qoor-goynta, Is-qarxinta iyo falal kale oo laga argagaxo.
Xukunnadaasi oo aan wax sal iyo raad-raacyo ku lahayn Shareecadda Islaamka, ayaa waxaa inta badan fulin jirey Dhallinyarro aad u da’ yar, kuwaasi oo dhalan-rog maskaxeed lagu sameeyey, iyagoo loo adeegsaday Daroogo iyo Falsafadda Xag-jirnimadda.
Ururka Alshabaab waxay sannadki 2009-kii guluf dagaal ku qaaadeen Ciiddamaddii Dowladda ee ku sugnaa qeybo ka mid ah Muqdisho, inkastoo ay ku fashilmeen inay Dowladdii KMG kala wareegaan Xarunta Madaxtooyadda.
Alshabaab oo ahaa Dagaalyahanno isugu jirtay Somali iyo Shisheeye ayaa waxay burbur xooggan u geysteen Degaannadii ay ku xooganaayeen, iyagoo cunaqabatayn iyo cabsi-gelin ku soo rogay dadweynihii iyo Hay’adihii Samafalka.
Waxayna cabsi gelintaasi sababtay inay Kumanaan qof ka soo qaxaan Deegaannadda Alshabaab oo iyagu Hab-dhaqankoodu ku salaysnaa Arxan-darro iyo Cadaadin aan garowshiyo Lahayn, waxaana falalkooda lagu tilmaami jirey kuwo la mid ah Fallaagaddii RUF ee dalka Siera Lione, kuwaasi oo ku caan baxay gacn-goynta iyo Askaraynta Carruurta.
Ururka Alshabaab waxay shartooda iyo Xag-jirnimadooda ku dhiirisay inay Dalalka Deriska u tallaabaan, iyagoo falal Isqarxin, dilal, Afduub iyo cabsi gelin ka fuliyey dalalka Kenya iyo Uganda.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Kooxda Alshabaab noqotay Khatar Caalami ah, isla markaana ay Cutubyo dagaalama u direen dalalka Yeman, Suurya, Mali, Libiya iyo Afgannistan.
Dowladaha Reer Galbeedka ayaa iyagana ku soo baraarugay Khatarta Alshabaab, kadib, markii ay boqolaal dhallinyarro ka soo hayaameen dalalkooda, kuna biiray Kooxda Alshabaab si ay dadka u halaagaan.
Tallaabadii ay Dowladda Maraykanka ku go’aansatay in ay baacsadaan Hoggaamiyayaasha Sare ee Kooxda Alshabaab ayaa abuurtay Jawi Jahwarereer, wuxuuna shaki ku kala abuuray Madaxdii Kooxdaasi oo iyagu bilaabay inay Firqo-firqo u kala go’aan, isla markaana u kala firxadaan Deegaanno kala duwan.
Kala-cararkaasi ayaa waxa uu horseeday inay Madaxdii Alshabaab badankooda magan-galaan Deegaannadda ay Beelahooda ku xooggan yihiin, si ay uga badbaadaan falalka shirqoolka ee uu Hoggaamkiyahooda Axmed Godane ku laynayo xubnaha ka horyimaada.
Dilkii Ibrahim Afghani iyo Macallim Burhaan ee bishii hore ay Kooxda Axmed Godane ku dileen magaalladda Baraawe iyo Firxadka Sheekh Xasan Daahir iyo Mukhtaar Roobow Cali ayaa muujinaysa in Kooxda Alshabaab uu gabalkoodii sii dumayo, iyadoo Halgankoodii Kursi-doonka uu shiiqmay.
Si kastaba ha ahaatee, Taariikhda Kooxda Hubeysan siiba kuwa Fikradaha Xag-jirnimadda haysta ayaa waxa uu halgankooda ku dambeeyaa Fashil iyo inay Madaxdooda kala firxadaan, is-dilaan ama is-basaasaan, waxaana cashar noogu filan Raad-xumidii Kooxda Alshabaab oo iyagu Boqolaal Kun oo Soomaali ah ka dhigay kuwo geeriyooda ama kuwo Qaxootinnimo ku nool.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo lagu wado in ay Maanta Gaaraan Magaalada London
Taageerayaasha Al Shabaab oo ka fara batay magaalo dhan asal ahaan dadkii degnaa (Bal Akhri yaabkaan+warbixin) !!
← Madax hore iyo Siyaasiyiin caan ah oo qorsheenaya maja xaabinta Dowlada Soomaaliya (Xog la helay)
Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyneysa cildii soo wajahday diyaaradii Madaxweynaha la socday →